ရိဒ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ကွမ်းသီးရောင်းဝယ်ရာတွင် ကုန်တင်ဆောင်မှု အကန့်အသတ်ကြောင့် ကွမ်းသီ?? - Yangon Media Group
ကလေး၊ ဧပြီ ၃
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်စည်ရောင်းဝယ် ရေး၏ ချင်းပြည်နယ်ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ ကွမ်းသီးအ ရောင်းအဝယ် တင်ပို့ရာတွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှကုန်စည်တန်ချိန် ကန့်သတ်မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံထွက်ကွမ်းသီးကုန်စည် တင်ပို့ရောင်းချမှုများကျဆင်းနေရကြောင်း ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဧပြီ ၂ ရက်တွင်ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့ကွမ်းသီးတင်ပို့ရောင်းချမှုမှတစ်ဖက်နိုင်ငံနယ်စပ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ကန့် သတ်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ကွမ်းသီးတင် ပို့မှုဟာ အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီး ကျဆင်းနေတယ်”ဟု ကွမ်းသီး ကုန်သည် ဦးလားလ်ထန်းငါက ပြောကြားသည်။ ရိဒ်နယ်စပ်ရောက်ကွမ်းသီးများ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ပို့ရာ တွင် တရားဝင်ဖြတ်သန်းတင်ပို့ခွင့်ရရှိသော်လည်း တံတားခံနိုင် စွမ်းရည်စွမ်းအားကိုအကြောင်းပြ၍ ကားတစ်စီးလျှင် ကွမ်းသီး အိတ် ၄ဝ ဝန်းကျင်သာတင်ဆောင်ရမည်ဟု ကန့်သတ်မှုကြောင့် ကွမ်းသီးကုန်သည် တစ်ဦးလျှင် နေ့စဉ်ကားခေါက်ရေ ၁ဝ ခေါက် မှ ၁၁ ခေါက်အထိ တင်ပို့နေရသည်။
”နယ်စပ်တံတားကဖြတ်ပို့နေရတဲ့ကားတွေမှာ ကွမ်းသီး အိတ်နိုင်သလောက်တင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကန့်သတ် ထားတဲ့အတိုင်းတင်ပို့နေရတာဆိုတော့ အခေါက်ခေါက်အခါခါ ပို့နေရတယ်။ စရိတ်တွေကုန်တယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်တင်ပို့ချင် သလောက်မရောက်ဘူး။ နယ်စပ်ရောက်ကုန်သည်တွေအနေ နဲ့ အချိန်ကုန်ငွေကုန်လူပန်းဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်”ဟု ကုန်သည် ဒေါ်နုက ပြောကြားသည်။ ရိဒ်နယ်စပ်မှတစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ နေ့စဉ်ကွမ်းသီးရောင်းဝယ် တင်ပို့နေသည့် ကုန်သည်ဦးရေမှာ ၃ဝ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး၊ ကွမ်း သီးအလုံးနှင့်အခြမ်းဟူ၍ နှစ်မျိုးတင်ပို့ရောင်းချကာ မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ထိုင်းကွမ်းသီးဟူ၍ ကွမ်းသီးအမျိုးအစား ငါး မျိုးဝန်းကျင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ ဒသမ ၆၃၃ သန်းန?
မုံရွာ ကလေးဆေးရုံတွင် ကလေးငယ်များ အသားဝါဓာတ်ကျ မီးချောင်း အလှူရှင်များလိုနေ